Mogadishu Journal » 2019 » June » 24
Mjournal :-Wafdi uu Hogaaminaayo Reysal Wasaaradaha Dowlada Federalka Somalia Xasan Cali Kheyre ayaa Galabta si,aad uheer sareysa loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Caasimada Galmudug ee Dhuusamareb Wafdiga Reysal wasaaraha ayaa iskugu jiray Wasiiro iyo Xildhibaano katirsan...
Mjournal :-Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ayaa goor dhow gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo wafdigiisa ayaa waxaa si weyn ugu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Wasiirka Arrimaha Gudaha dowlada...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabelele Maxamed Cabdi Waare ayaa kulan Albaabada u xiran yihiin Beledweyne kula qaatay Saraakiisha Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ee ka howlgalla Hir-Shabeelle. Kulanka ayaa ahaa mid looga hadlayay amniga Guud ee Gobolka...
Mjournal :-Warar soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in toogasho lagu dilay ninkii soo abaabulay ee ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee Maalin ak hor ka dhacay Ismaamulka Amxaarada ee dalka Itoobiya. Janaraal Asamnew Tsige ayaa la sheegay inay toogasho ku dileen ciidamada...
Mjournal :-Ciidamada Nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxaa ay ka fuliyeen Xaafado ka tirsan degmada Baardheere ee Gobolka Gedo,howlgalkaas oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay. Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxaa ay soo bandhigeen...
Mjournal :-Magalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ayaa la filayaa in Maalinta berito ay ka furmaan shirar horudhac u ah bilaawga wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dhowr sano aan qabsoomin. Kulamada ayaa waxaa soo qaban-qaabisay xarunta xallinta khilaafaadka ee...
Mjournal :-Xarunta Golaha Shacabka waxaa goordhow ka furmay Kulankii caadiga ahaa ee Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kaas oo todobaadkii la qabto saddex jeer. Kulanka ayaa ah kii 22-aad ee kalfadhiga 5-aad, waxaana uu ku furmay 144 Xildhibaan,...
RW Kheyre oo ku wajahan Dhuusamareeb iyo Amniga oo la adkeeyay
Mjournal :-Maanta ayaa la filayaa in Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ahna Xarunta Maamulka Galmudug inay gaaraan Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. Shalay gelinkii dambe ayaa waxaa Dhuusamareeb gaarayu...
Xaaf oo shaaciyay in uu buray heshiiskii Ahlusunna kuna dhawaaqay doorasho
Mjournal :-Qoraal uu soo saaray Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaaf ayuu ku shaaciyay in uu buray heshiiskii horay u dhexmaray Maamulkii gobolada Dhexe ee Ahlusunna iyo Maamulka Galmudug iyo in uu ogolaaday inay doorashada Galmudug ay waqtigeeda ku...
Mjournal :-War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda arrimaha Gudaha iyo dib u heshiisiinta ee Xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay inay dhamaatay waqtiga xilheynta ee Madaxda Galmudug,isla markaana dhawaan la qabanayo doorashada Galmudug. War-Saxaafadeedka ayaa lgu sheegay in...